Farta Instagram-ka-Farsameeyaha Farta ugu Fiican ee Bilaashka ah iyo Premium
Waa kuwee Farta Instagram-ka Waa su'aal aan in badan maqalno, wayna fududahay in laga jawaabo! Waxaa jira noocyo badan oo farmaajo Instagram ah oo aad ka dooran karto: halkan waxaa ah 38-ka xarfo ee Instagram ugu fiican baahiyahaaga Instagram. Waxaad labadaba ka heli doontaa liiskan. fara badan oo bilaash ah oo Instagram ah.
Xaqiiqda dhabta ah - fikradda saxda ah
₵ ₣ Ø ₦
  
ꌗ℗ @ © ҽ ắ
ғ𝐎𝐍 丅 ⓢ
Ｔⓢ 𝕆Ŧ ᶤｎⓢＴ𝓐𝐆Ř
千 𝓸𝔫𝕥Ｓ 𝓸 千 Ｓ
ᶠ𝓞ήţ𝕊 𝓞ᶠ ίή𝕊ţ 卂
Farta Instagram-ka - Fonts Instagram Waa maxay?
Kani waa aalad Instagram ah oo kuu oggolaanaysa inaad beddesho font-ka Instagram-ka. Kuwa soo socda ayaa ah wejiyada nooca ugu caansan ee Instagram: Dhammaan Koofiyadaha, Koofiyadaha Yaryar, Qoraal Xumbo, Qoraal labajibbaaran, Qoraal Ingiriisi hore ah, Fartaag, Qoraal Kor u kaca, Strikethrough, Khad aan la arki karin, iyo Zalgo. Dhammaan noocyada waxaa loo isticmaali karaa warbaahinta bulshada ama meelaha fariimaha la isku diro iyadoon wax xaddidnayn. Natiijadu waa qoraal caadi ah oo u eg Unicode oo ku jira Notepad.
Goobta ugu horeysa, geli qoraalka aad rabto inaad daabacdo. Beddelka qoraalka ayaa si firfircoon u beddela qoraalka duulista. Markaa waad koobi kartaa oo ku dhejin kartaa Instagram, Twitter ama Facebook. Farta instagram-ka waxaa loo isticmaali karaa profiles, farta instagram iyo faallooyinka. Haddii aad rabto noocyo qoraal ah, waxaad isticmaali kartaa xarfaha Emoji ama Unicode si aad isugu walaaqdo.
Astaamaha uu sameeyay koronto-dhaliyahaani maaha xarfaha Instagram-ka dhabta ah ee waa summada summada. Instagra, sidaa darteed, waad koobi kartaa oo ku dhejin kartaa noolahaaga iyo faallooyinkaaga. Haddii ay ahaan lahaayeen xarfaha dhabta ah, ma awoodi doontid inaad ku koobiyeysid meelo kale ("koobi iyo dheji font" macno ma samaynayso - naqshadeeyayaasha mareegaha ayaa dooranaya font aad isticmaashid, taas oo aan la bedeli karin).
Laakin haddii aad ugu yeerto xarfaha (ama xitaa Insta fonts, ama fonts IGG oo gaaban;), yaa daneynaya? Tan looguma talagalin in la bahdilo heerka Unicode. Runtii waa cajiib - in ka badan 100.000 oo calaamado qoraal ah, oo ay ku jiraan wax walba laga bilaabo xarfaha xarfaha sida kuwa kor lagu muujiyey, ilaa calaamado emoji yaab leh oo matalaya kumanaan shay oo kala duwan.
Haddii mid ka mid ah jilayaasha gaarka ah ee kor ku taxan aan lagu taageerin Instagram bio-gaaga (ama u muuqdo calaamado su'aal ama afargeesayaal fudud), aaladdaadu waxa laga yaabaa inay waydo xuruufta Unicode ee loo baahan yahay. Maadaama borotokoolka Unicode uu aad u ballaaran yahay, waxay qaadan doontaa waqti dheer in lagu daro dhammaan calaamadaha aaladaha mustaqbalka, laakiin horumarku aad buu u degdegaa marka waxay ahaan kartaa bil ama laba bilood ka hor inta uusan browserka/qalabkaagu taageerin.
Sideen u sameeyaa farta Instagram-ka?
Tallaabada 1aad: u tag https://instazoom.mobi/instagram-schrift/
Tallaabada 2aad: Barka aaladda, geli qoraalka aad rabto inaad u abuurto farta
Tallaabada 3aadKa koobbi farta aad rabto oo ku dheji meesha aad rabto.
Farta Instagram-ka waxay ka dhigaan faallooyinkaaga ama khadadka heerkaaga inay soo baxaan oo muujiyaan shakhsiyaddaada. Dhammaan si xor ah ayaa loo dooran karaa. Wixii su'aal ah oo ku saabsan adeeggan nooga yimid, waxaad naga tagi kartaa fariin: Kontakt